मंगल दोषबाट पिडित हुनुहुन्छ ! जानौ दोष दुर गर्ने बिधि -
मंगल दोषबाट पिडित हुनुहुन्छ ! जानौ दोष दुर गर्ने बिधि
२०७६, २४ भाद्र मंगलवार ००:११ September 10, 2019 clickonLeaveaComment on मंगल दोषबाट पिडित हुनुहुन्छ ! जानौ दोष दुर गर्ने बिधि
मंगलवार मंगल दोष दुर गर्ने बिधि
मंगल ग्रहको पुजा मंगल ग्रहको आफ्नो दिन मंगलवार हो अत: मंगलवारको दिन व्रत (उपवास) राखौ र साधना पूजन गरेउ भने अति उत्तम हुन्छ हुन्छ। मंगलवारको दिन सूर्योदय भन्दा पहिले (पहले) उठेर निवृत्त भएर तन-मन लाइ स्वच्छ गरौ।
मंगलवार दुख र कलेशबाट मुक्ति लागि हनुमान पुजा
हनुमान जी को आराधना गर्दा हरेक पाप र हरेक कष्‍टबाट मुक्‍ति मिल्छ। हनुमान जी भूत-प्रेत बाट पनि आफ्नो भक्‍तहरु लाई बचाउनुहुन्छ । जस घरमा हनुमान जी को कृपा हुन्छ वहां त्यहा कुनै पनि दुख, क्‍लेश नजिक आउन पाउदैन । इनलाई सात चिरंजीवि (अमर) हरुमा एक् मानिएको छ। उहा सबै कलाहरुमा सिद्धहस्त एवं माहिर थिए। रामका परम भक्त हनुमान बल, बुद्धि र विद्याको प्रदाता हुनुको साथै , अष्ट सिद्धि र नौ निधिहरुको दाता पनि मानिएको छ । उनि ज्योतिषको पनि प्रकांड विद्वान थिए। ऋग्वेदमा उनलाई ‘विश्ववेदसम्’ शब्दले प्रयोग गरिएको छ, यस्को अर्थ हो- विद्वानहरुमा सर्वश्रेष्ठ। त्यसैले हनुमान जी को पूजा यदि केहि विशेष मंत्रहरुले गरेमा हनुमानजि अत्‍यंत प्रसन्‍न हुनुहुन्छ।
रितिक रोशन र टाईगर श्राफको नया चलचित्र “वार” को पहिलो गित सार्बजनिक [भिडिओ]
पथलैया–निजगढ सडकखण्ड मा भएको सडक दुर्घटना मा सशस्त्रका एसपी को मृत्यु र सिडिओ घाईते
२०७५, १३ माघ आईतवार ०३:२९ January 27, 2019 clickon
२०७६, २४ भाद्र मंगलवार ००:२० September 10, 2019 clickon
२०७५, ३१ जेष्ठ बिहीबार ०२:३० June 14, 2018 clickon